Xildhibaan Daad oo ka hadlay xiriirka ganacsatada dalka ka guuraya iyo hoos u dhaca dhaqaalaha Puntland – Kalfadhi
Xildhibaan Daad oo ka hadlay xiriirka ganacsatada dalka ka guuraya iyo hoos u dhaca dhaqaalaha Puntland
Xildhibaan Axmed Jaamac Diiriye (Daad) oo ka tirsan guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiillada Puntland ayaa muujiyay in ganacsatada dibedda u guuraya isla markaasna qoysaskooda wadanka ka raraya ay saamayn ku yeesheen hoos u dhaca dhaqaalaha.
Wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa kalfadhigii 44raad u sheegtay Baarlamanka in hoos u dhac dakhli oo weyni uu haysto xukuumadda, waa sababta keentay in sannadkan aysan dowladdu yeelan miisaaniyad cusub isla markaasna ay ku shaqaynayso tii sannadkii hore.
Mar uu Xildhibaanku ka jawaabay su’aalo ay dadweynuhu ku weydiiyeen barnaamij uu qabtay TV-ga Dowladdu ayuu sheegay in amni daradii ka jirtay Boosaso oo ah xaruunta ganacsiga Puntland ay keentay ay ganacsatada qaarkeed iyo dadkii awoodda u lahaa in ay wax iibsadaan ay dalka dibedda uga bexeen.
“Dadkii adeegan jiray ee dhaqaalaha haystay ee wax iibsan lahaa, haday wadanka ka baxaan dee wadanka dhaqaalihiisu hoos buu u dhacayaa” ayuu yiri Xildhibaan Daad.
Dowladda Puntland ayaa hay’ado kala duwan oo amni ka hawl-gelisay Boosaso horaantii sannadkan si wax looga qabto dilal qorshaysan oo ay kooxaha Daacish iyo Al-shabaab ku beegsanayeen dadka siyaasiyiinta ah, kuwa dowladda u shaqeeya iyo ganacsatada waa weyn.
Xildhibaan Daad wuxuu sheegay in dadadaalaas ay wax badan bedeleen oo amnigu soo hagaagayo. “Ganacsatada waxaan ka rajaynaynaa hantida ay geliyeen Turkiga in ay wadanka geliyaan” ayuu yiri.
Bartamaha Sibtembar waxaa Puntland ka furmaya madal ay dowladdu abaabushay oo looga hadli doono maalgashiga, taas oo lagu casumay ganacsato Soomaaliyeed, shirkaddo iyo hay’ado caalami ah.
Xubno ka tirsan Guddiga-Doorashooyinka Soomaaliya oo dalka Norway u jooga kormeer iyo wax-barasho
Guddiga Baarlamaanka ee Diyaarinta Sharciga Doorashooyinka Qaranka oo la kulmay axsaabta siyaasadda